तुलसीपुरस्थित कृषि क्याम्पसमा तोडफोड :: Setopati
तुलसीपुरस्थित कृषि क्याम्पसमा तोडफोड
नारायण खड्का दाङ,माघ २३
दाङ तुलसीपुरको एउटा कृषि क्याम्पसमा तोडफोड भएको छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ क्याम्पस रोडस्थित क्याम्पस अफ लाईभ साईन्सेस क्याम्पसमा मंगलबार दिउँसो तोडफोड भएको छ। दिउँसो सवा तीन बजेतिर नेकपा एमालेका निकटको भातृ संगठन अनेरास्ववियूका कार्यकर्ताले क्याम्पसमा तोडफोड गरेको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख एवं डिएसपी प्रकाश सापकोटाले बताए।
आठवटा मोटरसाइलकमा आएका १६ जना युवाहरूले क्याम्पसको झ्याल, ढोका र फर्निचर तोडफोड गरेको सापकोटाले बताए।
तोडफोडको कारण अनेरास्ववियूको आन्तरिक विवाद
बिएसीएजी पढाई हुँदै आएको उक्त क्याम्पस तोडफोड हुनुको मुख्य कारण भने अनेरास्ववियूभित्रको आन्तरिक विवादलाई मानिएको छ।
झन्डै एक महिनाअघि अनेरास्ववियू दाङका अध्यक्ष वीरबल खड्कालाई जनता विद्यापिठ विजौरीमा आक्रमण गर्ने अनेरास्ववियूकै पूर्व उपाध्यक्ष सर्जन परियार नेतृत्वको टोलीले क्याम्पसमा तोडफोड गरेको हो। जनता विद्यापिठ विजौरीमा अनेरास्ववियूकै तत्कालीन जिल्ला उपाध्यक्ष परियार आफैँले अध्यक्ष खड्कामाथि हेलमेट प्रहार गरेको आरोप लागेपछि परियारलाई पार्टीले संगठनबाट निष्काशित गरेको थियो।
कारवाही परेपनि आफूलाई अनेरास्ववियूको जिल्ला अध्यक्ष दाबी गर्दै आएका परियारको समूहले जिल्लाका केही क्याम्पसहरूमा समानान्तर कमिटी गठन गर्दै आएको छ। त्यही क्रममा मंगलबार बिहान उनीहरू तुलसीपुरस्थित कृषि क्याम्पसमा संगठन विस्तार गर्न आएका थिए। तर, क्याम्पस प्रशासनले उनीहरूलाई रोकेको थियो।
आफूमाथि हातपात र अभद्र व्यवहार भएको आसयसहितको पत्र लेखेर भित्तामा टाँसी क्याम्पस प्रशासनले माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै तालाबन्दी गरेको उल्लेख गरेका थिए। उक्त टाँसिएको पत्रमा अनेरास्ववियूका दाङका अध्यक्ष सर्जन परियार र सचिव विराज बिसी भन्ने उल्लेख छ। परियार एक महिना अघि मात्रै कारवाहीमा परेका व्यक्ति थिए। त्यसैले, अनेरास्ववियूका अध्यक्ष वीरबल खड्काको निर्देशनमा परियारको समूहले लगाएको ताला फोडिएको थियो। ताला फोडेको आक्रोशमा परियार नेतृत्वको समूह आएर क्याम्पसमा तोडफोड गरेको प्रहरीले बताएको छ। ‘अनेरास्ववियूका अध्यक्ष वीरबल खड्काको टाउको फोड्ने अराजक जत्थाले क्याम्पस पनि फोडेको छ,’ त्यहाँ उपस्थित एकजना अनेरास्ववियूका विद्यार्थी नेताले भने ।
क्याम्पसमा एमालेकै नेताको लगानी
मंगलबार एमाले निकटको अनेरास्ववियूकै असन्तुष्ट समूहले तोडफोड गरेको तुलसीपुरको कृषि क्याम्पसमा मुख्य लगानी एमालेकै नेताहरूको छ। हाल यो क्याम्पसको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नेकपा एमालेका प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेश कमिटी सदस्य उदय बोहोरा नै छन्।उक्त क्याम्पसमा एमाले नेता तथा सल्यानबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य प्रकास ज्वालाको पनि लगानी रहेको बताइन्छ ।
यसैबीच उदय अध्यक्ष बोहोराले बिहान सर्जन परियारको नेतृत्वमा आएका चारजना युवाहरू जबरजस्ती क्याम्पसभित्र प्रवेश गरि पढाई रहेका शिक्षकलाई बाहिर निकाली विद्यार्थीसँगै चुक्कुल लगाएरभित्र पसेर धम्काएको आरोप लगाए।
उनीहरूले अनेरास्ववियूका जिल्ला नेता हौं र संगठन विस्तारमा आएका हौं भनेपनि हामीलाई शंका लागेर अनेरास्ववियूको जिल्ला नेतृत्वलाई सोध्दा उनीहरू आफ्नो संगठनका नभएको भन्ने जवाफ पाएपछि आफूहरूले पढाउन प्रयास गर्दा उल्टै थर्काएको अध्यक्ष बोहोराले बताए। त्यस्तै, क्याम्पसका कर्मचारी रविन्द्र केसीले पनि किन शिक्षकलाई बाहिर निकाल्ने ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनीहरूले आफूलाई अपमान र दुर्व्यवहार गरियो, संगठन विस्तार गर्न दिएन भन्दै ताल्चा लगाएर पत्र टाँसेर उनीहरू गएको बताए । तर, अनेरास्ववियूकै अर्काे पक्षले उक्त ताल्चा फोडेपछि दिउँसो क्याम्पसमा आएर उनीहरूले तोडफोड गरेको केसीले बताए। तोडफोडबाट कति क्षति भएको छ? भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २३, २०७४, ०६:४६:२४
सकियो ओली-नेपाल वार्ता
सन्दीप लामिछानेले ४ ओभरमा ४२ रन दिएर ३ विकेट लिए, नेपाल जित नजिक